Radio Dhangadhi 90.5 MHz | आधुनिक पत्रकारीता राज्यको चौथो अङ्ग हुन सकेको छैन
शुक्रबार, २३ असार २०७४| Nirmala Khadayat
धनगढी, २३ असार ।
हामी गल्ती गर्छौ त्यो कमजोरी होइन । तर कमजारी यो हो हामी गल्ती दोहोर्याइ रहन्छौ । अरूले गल्तीबाट सिक्छन तर हामीले चाहिँ एउटै गल्ती बारम्बार गरिरह्यौ । तर अब पत्रकारहरुले पनि सुध्रिनुपर्छ । उनिहरुले सरोकारवाला निकाय ,स्थानिय सरकारका प्रतिनीधिलाइ सचेत पार्नुछःःत्यसैले यसको लागी पहिले पत्रकारहरु सञ्चारकर्मीहरु आफु सक्षम सचेत हुनु जरुरी छ ।
हाम्रा सञ्चारमाध्यम जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी चल्न सकेका छैनन, पत्रकारितालाई राष्ट्रको चौथो अंग भनिन्छ, तर, पत्रकारितालाई चौथो अंग भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । जनताहरुलाइ सहि र सत्य सुचना दिन असमर्थ भएकाछन सञ्चारकर्मीहरु । चौथो अंग हुनाका लागि आवाजविहीनहरुको आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, नदेखिएका तर पारदर्शि हुनुपर्ने कुराहरु देखिनुुपर्छ ।
अनि मात्रै पत्रकारितालाई चौथो अंग भनेर हामी दाबी गर्न सक्छौ । शक्ति र सत्तामा हुनेहरुको पछि लागेर स्वयम आफु प्रयोग भइरहेका हुन्छन जनतालाइ सुसुचित गर्छौ भन्नेहरु । पहिलेको तुलनामा पत्रकारीतामा निकै बिकास भएको मानिए पनि पत्रकारीताको वास्तविक रुप फेरिदैछ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
आजभोली जनताका समस्याहरु भन्दा ठुलाबडाका बयान गर्नमा बढि केन्द्रित हुदैछन मिडियाहरु । कसरी बिश्वस्त हुन सक्छन जनताहरु यस्ता पत्रकार र पत्रकारीता प्रति ? प्रश्न जन्मिन्छ ।
हालै स्थानिय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । यहि समयमा पनि धेरै पत्रकारहरुले पार्टिको पक्ष लिएर पत्रकारीता गरे । कसैले एउटा पार्टि जित्छ भनेर समाचार प्रसारण प्रकाशन गर्यो भने अर्कोले अर्को पार्टिले चुनाव जित्छ भनेर प्रचार गर्यो । चुनावको प्रचार भैरहेको बेला देखि लिएर मतगणना सम्पन्न नहुदा सम्म पनि पार्टिको पक्षमै समाचार दिइरहे । मतगणनाको परिणम एउटै भएपनि हरेक मिडियाले दिने समाचार फरक भयो । अब सम्झनुपर्ने कुरा छ, जनताले कुन समाचारमा बिश्वास गर्ने रु नामी पत्रकारहरुले पनि कुनै न कुनै राजनितिक झण्डा बोकेरै हिडेका हुन्छन ।
प्रचारबादि मिडियाको कारण पत्रकारीता बदनाम हुदैछ ,यदि पत्रकारीमा सुधार हुने होइन भने हामी जस्ता सिक्छौ, पढ्छौ र पत्रकारीतालाइ लक्ष्य मानेर अघि बढ्छौ भनेर आएकाहरुको भविष्य भोलिको पत्रकारीतामा के होला ? हिजोआज मान्छेहरु सञ्चारमाध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट बढि सुचना पाइरहेका छन ।
सायद बिश्वमै आधि जती भन्दा बढि मान्छेहरु सुचनाको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिसकेका छन । यस्तो अवस्थामा पनि मिडिया प्रचारवाजी भएर नै अगाडि बढ्ने हो भने भोली पत्रपत्रिका र रेडियो टिभी हरु कुनै ब्यक्ति, पार्टि वा संगठनका प्रोपागान्डाका रुपमा चिनिनेछन भन्न नसिकिएला ।
स्थानिय तहको चुनाव पछि सबै जनताहरुले नेपालिहरुले देशको नयाँ बिकास हुने आशा बोकेका छन । निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि कुन दलले जित्यो अथवा कुन ब्यक्तिले जित्यो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण होइन । महत्वपुर्ण विषय भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिले के कतिको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो ।
यसको लागी मिडियाले पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाइ झकझक्याउने,उनिहरुका काम कर्तब्यहरु सम्झाउने गर्न सक्नुपर्छ । जसको लागी अब मिडियामा संलग्न पत्रकारहरु स्वयमले पनि पहिले आफुलाइ आफ्नो कर्तब्य र नैतिकता सम्झाउन जरुरी छ ।
जुन सुकै पार्टिका ब्यक्ति निर्वाचित भएपनि अब उनिहरुलाइ बिकास निर्माणको लागी उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्थानिय सरकारको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी दिदै स्थानिय सरकारका बिधि र प्रक्रियाबारे आफु पनि जानकार भइ अरु पनि जानकारी दिन सनुपर्छ ।
कुनै गाउँ वा नगरलाइ चरम बिभेद, चरम अभाव, दुःख र कष्टबाट मुक्त दिलाउनु नै स्थानिय सरकारको कर्तब्य हो । भने जनताका समस्याहरु सरोकारवालालाइ सम्झाएर समाधान गर्न दबाब दिनु पत्रकारहरुको कर्तब्य हो ।
मार्क ट्वेनले भनेका थिए, ’इफ यु डु नट रिड द न्युजपेपर युआर नट इन्फम्र्ड　। इफ यु रिड द न्युजपेपर यु आर मिस इन्फम्र्ड　।’ अर्थात, पत्रिका पढेन भने जानकारी पाइँदैन, पत्रिका पढ्यो भने गलत जानकारी पाइन्छ　। यो कुरा हाम्रो पत्रकारीतामा पनि भैरहेको छ ।
सम्झनुपर्ने कुरा यो छ की अब पनि पत्रकारीतालाइ राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा प्रमाणित गर्न सकिएन भने, पत्रकारीता प्रति जनताको बिश्वास जोगाइ राख्न गाह्रो हुन्छ ।
शुक्रबार २३, असार २०७४ ०६:१७ मा प्रकाशित ।